Mira Kuvaka Crappy Software - Yakabatanidzwa Software Uchiri Kukunda | Martech Zone
Hechino chimwe chinhu chemukati maCIO uye ako emukati matekinoroji matimu haadi kuti iwe uzive, iyo-18-mwedzi software yekumisikidza iyo inongokubhadharira iwe $ 500K - $ 1MM inogona kuitwa gehena yezvakawanda isingadhuri… uye inofanirwa kuve. Ivo vari kuvaka kuchengetedzeka kwemabasa nekuti vazhinji veC-level vatungamiriri nevashambadzi havanzwisise kuti tekinoroji inogona sei uye inofanirwa kushanda.
Sevashambadzi isu tese tinoda iyo software yakafanana neunicorn. Uyo anoita mutungamiri wechizvarwa, zvemukati zvisikwa, inotungamira zvibodzwa, yekushandura optimization ... o, hongu, uye iine analytics rukoko pamusoro payo. Uye, sevashambadziri uye tekinoroji, isu tinoda kuenda kunovaka software nekuti tinogutsikana kuti hatigone kuwana izvo zvatinoda. Ichokwadi, zvisinei, ndechekuti isu tinogona kuwana padyo ne90% yezvatinoda kana tikamira kutsvaga iyo unicorn mune inodhura, inodhura-mutengo "mhinduro" uye totanga kutarisa kune akabatanidzwa mawebhu webhu pane chikamu chemutengo.
Saka chii chaunofanira kutarisa kana uchiita zvakasanganiswa zvewebhu webhu? Hezvino zvinhu zvepamusoro zvitatu zvaunofanira kutsvaga:
1) Sanganisa Zvakasununguka
Kunyangwe iwe uri kutarisa kune vanopa email sevhisi, accounting software, kana chero chinhu chiri pakati, iwe unofanirwa kutsvaga sevhisi inosangana zvakasununguka. Sei? Nekuti zvinoreva kuti sevhisi inokutendera iwe kushandisa yako data nenzira yaunoda iwe. Chakavanzika chekushandisa chero sevhisi kunzwisisa kuti imwe yepakati tenet - data ndeyako, kwete sevhisi. Kambani inoda kusanganisa pamwe nezviuru zvemasevhisi inonzwisisa izvi uye nokudaro inoita kuti ishandise sevhisi yavo ive nyore.
2) Vhura API
Kunyangwe usiri mugadziri uye usati wambonzwa nezvekuvhurwa API iwe unofanirwa kutsvaga masevhisi ane akavhurika APIs. Icho chikonzero chiri nyore, maAPI anotendera chero munhu kuvaka masevhisi uye zvigadzirwa pamusoro peapp yavo. Sei izvi zvichikosha? Chimwe chikonzero chikuru ndechekuti inobvumidza kushandiswa kwekugadzira kwepamoyo app. Chero ani zvake anogona kuuya kuzovaka sevhisi inobatsira inogona kuvhara gomba kana kukupa iwe yakawedzera mukana. Chimwe chikonzero chikuru ndechekuti iwe UNOGONA kuvaka pamusoro payo. Rangarira iyo unicorn yandakambotaura nezvayo pakutanga? Kana iwe kana wekuvandudza zviwanikwa uine zvehunyanzvi zvimedu, unogona kuvaka pamusoro peapp, kana kushandisa data nenzira yaunoda iwe. Vhura APIss inopa anovandudza chimiro chekushandira kubva uye hazviite kuti iwe ugadzire kana kuvaka zvakare sevhisi.
3) Inharaunda Inoshanda
Chimwe chezvinhu zvinoshamisira zvandakaona zvichishanda muindastiri iyi ndeyekuti makambani / maapplication anogamuchira pfungwa yekubatanidzwa ane mushandisi ane hutano, anoshanda, uye akasimba. Hongu, mamwe akasimba kupfuura mamwe, asi makambani mazhinji anogamuchira pfungwa yekubatana ane mushandisi wepasi anoda kubatana. Sei zvakakosha kuwana maapplication ane iyi nharaunda vibe? Nekuti mazhinji maapplication ane izvi zvakare iterate pane yavo app, teerera kune vatengi mhinduro, uye kazhinji vane zvinokurudzira zvekuenderera nekuchengetedza nekukura iyo mushandisi base. Mazhinji mapurogiramu anomira anomira iterating kana chete iterate kamwe chete kana kaviri pagore. Iwe unoda kutsvaga maapplication ayo ari kuramba achivandudza uye achiburitsa masanganiswa matsva, nekudaro achizarurira iwe kune mimwe mikana.
Izvi hazvisi izvo zvega zvinhu zvekutarisa asi mune yangu ruzivo ivo vari kutaura kwazvo zviratidzo zveapp yakanaka. Mapurogiramu akabatanidzwa anogona kubatsira kukuchengetedza nguva, mari, uye nemusoro. Kutarisa kuvaka iyo unicorn ibasa rebenzi, kunyanya kana iwe uchigona kuwana mashoma akasimba akabatanidzwa maapplication anogadzirisa ruzhinji rwezvaunoda.
Ngatizivisei kuti ndeapi mamwe emaapp aunofarira akabatanidzwa pazasi.
Nharembozha uye Yako Supercharged Mauto Ekutengesa
Sep 25, 2012 na9:16 PM
Ini ndinogara ndichishamiswa nemakotesheni uye nguva yakatarwa iyo vatengi vedu dzimwe nguva vanopihwa neavo veIT zvikwata pane mamwe mapurojekiti. Waisagona kuzvitaura nani… yakavimbika, yakachengeteka uye yakasimba software iri nyore kupfuura kare kugadzira.